Oway Travel and Tours - Page4of5-
ပြည်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့တစ်မြို့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါ အဲဒီမြို့ရဲ့အကြောင်းကို သေသေချာချာလေ့လာနိုင်အောင် သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာတွေကို Oway ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေအတွက် ဗဟုသုတအလို့ငှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုင်များ သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့မြို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကို ရှာဖွေဝယ်ယူနိူင်ပါတယ်။ တချို့စာအုပ်ဆိုင်တွေကို ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေမှာ ဖွင့်လှစ်ထားကြောင့် သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဗိသုကာလက်ရာတွေကိုပါ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Café များ Café တွေဟာ ခဏအနားယူနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ရုံတင်မကပါဘူး။ Read More
— By Oway September 27, 2018 Tours	Comments Off on Zoom into the Unspoilt Natural Landscape of Myanmar
On the coast of an island on Andaman Sea at the southern part of Myanmar lies the untouched, unspoilt Myeik Archipelago. Beautiful limestone outcrops, tropical Read More
— By Oway September 27, 2018 Travel Tips	Comments Off on Planningatrekking trip? Here’re useful tips for you!
Improving fitness and exposing the beauty of nature at its best, trekking becomes increasingly popular among world travelers. Trekking is the best option if you Read More
— By Oway September 27, 2018 May 7, 2020 Hotels	Comments Off on ကိုလိုနီခတျေဗိသုကာလကျရာကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားသော ရနျကုနျမွို့မှ ဟိုတယျမြား
ခတျေမီနညျးပညာတှနေဲ့ တိုးတကျပွောငျးလဲလာတဲ့ယနခေ့တျေမှာ ကိုလိုနီခတျေဗိသုကာလကျရာတှကေို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားဆဲလကျြရှိတဲ့ ရနျကုနျမွို့က ဟိုတယျအခြို့ကို Oway ခရီးသှားမိတျဆှတှေအေတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါရစေ။ The Strand Hotel ၁၉၀၁ ခုနှဈကတညျဆောကျခဲ့တဲ့ Strand Hotel ဟာ ရနျကုနျမွို့ရဲ့သကျတမျးအရငျ့ဆုံးဟိုတယျတဈခုဖွဈပွီး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈစာရငျးမှာပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ခနျ့ညားထညျဝါတဲ့ မကျြနှာကကျြအမွငျ့ကွီးတှေ၊ ကွိမျထညျပရိဘောဂတှနေဲ့ စကငျြကြောကျကွမျးပွငျတှဟော Strand Hotel ရဲ့ပွယုဂျတှပေါပဲ။ Belmond Read More